तिहार मसला मूल्य केजीमै सात सयसम्मले वृद्धि, कुन मसलाको मूल्य कति ? – Daunne News
तिहार मसला मूल्य केजीमै सात सयसम्मले वृद्धि, कुन मसलाको मूल्य कति ?
By Daunne News	 On कार्तिक १५, ०९:४९
नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु हुन एक साता मात्र बाँकी छ । बजारमा तिहारको रौनक सुरु भइसकेको छ । तिहारको मसला किन्नेको भीड लाग्न थालिसकेको छ । तिहारको मसला विशेषगरी भाइटीकामा प्रयोग हुन्छ । अहिले अत्यधिक महँगोमा व्यवसायीहरूले तिहारको मसला बेचिरहेका छन् ।
व्यवसायीहरू आफूले नै महँगो मूल्यमा ल्याएकाले उपभोक्तालाई पनि महँगो पर्न गएको बताउँछन् । एउटै मसलामा केजीमा सात सय रुपैयाँसम्मले बढेको छ । अधिकांश मसलाका आइटमहरूमा तिहारको समयमा मूल्य बढेको हो ।
ओखर, खुर्पानी र मखनामा प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँले बढेको छ भने सुकुमेल प्रतिकेजी सात सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । अन्जिर प्रतिकेजी पाँच सय रुपैयाँले बढेको खुद्रा ब्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
यी सामाना आयात गर्नुपर्ने र डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण उपभोक्तालाई महँगो परेको व्यवसायीहरू बताउँदै आएका छन् ।
कावासोतीमा पुष ८ गतेदेखि खाना महोत्सव
उद्योगपति चौधरी मधेसी कोटाबाट महाधिबेशन प्रतिनिधि